Dadka reer Baydhabo oo ka cabsi qaba dagaal kadib hanjabaado dhaxmaray maamulkii hore iyo Al-shabaab. [Akhris …] – Radio Daljir
Dadka reer Baydhabo oo ka cabsi qaba dagaal kadib hanjabaado dhaxmaray maamulkii hore iyo Al-shabaab. [Akhris …]
Juunyo 24, 2009 12:00 b 0
Baydhabo, June 24 | Dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo degmaooyinka isla gobolkaasi ayaa cabsi xooggan ka muujinaya suurto galnimada dagaal ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo, kadib markii ay dhawaan hanjabaado kul-kulul ay is dhaafaseen xubno ka tirsanaa maamulkii lagala wareeray gobolkaasi iyo kuwa hadda gacanta ku haya ee Al-shabaab.
Hanjabaadahaan iyo hadallada kul-kulul ee ay labada dhinac is weydaarsadeen ayaa ahaa kuwa ku salaysanaa dagaal iyo dirir mar kale oa dhacda gobolkaasi, oo ay bannaanka uga maqan-yiin dhammaanba mas’uuliyiintii horay u maamuli jirtay sida maamulkii guud ee gobolka iyo kii degmooyinka oo dhan.
Maxamed Ibraahim Xaabse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dawladda KMG ah ee Soomaaliya horayna u ahaan jiray wasiirkii gaadiidka cirka iyo dhulkan ayaa dhawaan shir jiraa’id uu uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa uu ku sheegay in ay dagaal la gali doonaan xooggaga gacanta ku haya gobollada Baay iyo Bakool ee Xarakatu Al-shabaabul Mujaahidiin.
Hadalka xildhibaankaasi ayaa waxaa ka sii horreeyey hadal isna ka soo yeeray guddoomiyihii maamulka gobolka Baay ee dawladdu ay u magacowday xilli sii horreeyey C/fitaax Ibraahim Geesay, kaasi oo hadda dibad joog ku ah deegaanka dowlow ee xadka Soomaaaliya ay la wadaagto dalka Itoobiya halkaasi oo la sheegay in uu ka wado hub uruursi.
Geesay, waxaa uu dhankiisa sheegay mardhaw in uu dib ugu soo laaban doono gobolkii uu xukumi jiray ee Baay isla markaan uu dagaal la gali doono xooggaga hadda gacanta ku haya gobolkaasi.
Dhammaan hadalladaasi waxaa ka sii danbeeyey mid ururka Al-shabaab uu uga jawaabayey oo isna ku aaddana in ay dagaal kala hor tagi doonaan cidkasta oo isku dayda in ay soo weerarto deegaanada ay xukumaan ee Baay iyo Bakool.
Shiikh Muqtaar Roobow (Abu Sansuur) oo maalintii shalay ahayd la hadlay saxaafadda ayaa si kulul isana ugu Hanajabay mas’uuliyiintii iyo maamulladii gacanta ku hayn-jiray gobollada Baay iyo Bakool, kuwaasi oo uu ku sheegay in ay ahaayeen shadaadiin muslimka laga qabtay waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaana uu intaasi ku daray in dagaal kula gali doonaan meelkasta oo ay gabaad ka dhigtaan.
Hadallada kul_kulul iyo hanjabaadaha labada dhinac waxaa ay wal-wal ballaaran ku abuurtay dhammaan dadka shacabka ah ee ku nool gobollada Baay iyo Bakool, kuwaasi oo wadnaha farta ku haya cabsi ay ka qabaan dagaallo kale dartood waxaana arrintaasi ay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinkii ugu danbeeyey daganaasho nabadeed laga dareemayey gobolkaasi.
Cali C/qaadir Cali.